Yakasarudzika yeVashandi Kurumbidza Musangano we 2019 | Hongli
2020/6/15, kambani yedu yakabata Musangano weVashandi Vakasarudzika Wegore ra1999. Panguva yemusangano, kutanga, sahwira vedu Mr.Xie vanopfupisa kuita kwegore rapfuura. Iro rekutengesa vhoriyamu yekutsvedza yakawedzera uye iyo nzira ye escalator yekushandisa yekugadzira mutsara ine hunyanzvi. Mwaka wadarika, kambani yedu yakasimudzira budiriro uye gore rino takatarisana nematambudziko. Munguva yekutanga hafu yegore, kambani yedu yakagadzira chirongwa cheMelt-blown machina machira uye yakawana zvakanakisa kubudirira. Asi isu tichiri kufanira kuona kusarongeka kwechirongwa uye tobva tasimudzira.
Zvichakadaro, mamaneja matatu emusangano vese vanoita hurukuro pamusoro pechirongwa chekushanda chega chega musangano.
Zvadaro, vedu vedu vanorumbidza vashandi vakasarudzika vegore rapfuura. Mumwe nemumwe ane chitupa chekuremekedzwa. Chitupa ichi chinomiririra kuedza kwavakaita gore rapfuura.
Zvakanaka, chirongwa chakanyanya kukosha panguva yemusangano uyu ndechekuti technical centre yedu itange. Izvo zvinoreva kuti tekinoroji yekambani yedu yakaita kukurudzira kukuru. Nekubatsirwa kweiyo tekinoroji yekambani, simba rekambani yedu yekuzvimiririra innovation inowedzera. Uye chigadzirwa chedu chichava chakanyanya kusimba uye chinowoneka nyore.
Pakupedzisira, kambani yedu inorumbidza vashandi vakatanhamara veMelt-blown machini machira chirongwa. Vashandi vedu vakaita zvakanaka zvinoshamisa panguva yechirongwa ichi. Semuenzaniso, kana isu tatengesa muchina, maneja we technical center uye vamwe vashandi vanoverengeka vanoenda kukambani yemutengi kunobatsira kuisa hapana kana riini. Nekuedza kwavo, mutengi anofarira muchina wedu.